हृदयघात हुनु अघि छालामा देखिन्छन् यस्ता परिवर्तन, बन्नसक्छ मुत्युको कारण – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/हृदयघात हुनु अघि छालामा देखिन्छन् यस्ता परिवर्तन, बन्नसक्छ मुत्युको कारण
हृदयघात हुनु अघि छालामा देखिन्छन् यस्ता परिवर्तन, बन्नसक्छ मुत्युको कारण
काठमाडौँ । संसारमा सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण हृदयघात हो । हृदयसम्बन्धी रोगले धेरैजनालाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । आखिर किन यति धेरै हृदयसम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन् ? किन यो रोग बढ्दो छ ? मूलतः यसका दुई कारण छन् ।